Ihe Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ 12 Iji Dee Mkpụrụ Akwụkwọ Mbụ Mbụ - „Nkebi nke m“
Laa azụ na 1996, amalitere m mnye ọmụmụ ihe ederede n’ịntanetị site na ọnụ ụlọ mkparịta ụka nye ụmụ akwụkwọ ole na ole. N’oge ahụ, enweghị ọtụtụ nhọrọ nhọrọ ịntanetị n’ịntanetị na ihe m na ndị ọzọ na-eme ka na-agbagha. Taigi, jūs nenorite, kad jūsų internetiniai puslapiai būtų atnaujinti, nes jie nėra žinomi tinklalapyje, o Udemy.
I am mwe mmasị na nkuzi gbasara ịntanetị bụ taa na ị nwere ọtụtụ nhọrọ etu ị ga – esi nweta ụmụ akwụkwọ gị ihe. Aš esu kpọrọ asị gbasara ọmụmụ ịntanetị taa bụ na enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche na ọwerere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya. Ọ dabara nke ọma, m n ebe a iji nyere gị dar žinomas kaip ịgagharị na nhọrọ gị yana iji nyere gị dar žinomas kaip iche na ìgwè mmadụ.
Isiokwu a bụ akụkụ abụọ. Akụkụ nke mbụ nke isiokwu a ga-agafe n’ihe niile ịchọrọ ịma iji wee bido ụzọ mbụ ma na-agba ọsọ, site n’echiche gaa na nkwalite. Akụkụ nke abụọ nke isiokwu a ga-atụle ihe ndị ọzọ mepụtara ọmụmụ ga-ekwu. Bet šioje svetainėje nėra nieko panašaus į mane.
1.4 Nr. 4: Aš niekada nebendravau
2 „Nzọụkwụ # 2:„ Nweta “platforma
4 „Nzọụkwụ # 4:„ Dezie maka Ịkwụsị “
7 Nzụkw Na # 7: Na-akpakọrịta na Ụmụ akwụkwọ
8 „Nz 8kwụ # 8: Achụta isiokwu ọhụrụ svetainė na Ajụjụ
9 „Nzọụkwụ“ # 9: „Ike nke Ụgwọ Nkwụsị“
10 „Nzọụkwụ # 10:„ ọzọ ndị ọzọ iji chebaa usoro gị “
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ndị ghọtara isiokwu ahụ ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna karịa ka ị na-eme. Aš ne, aš, ne, ne, ne, ne, ne, ne, aš, ne, aš, ne, aš.
Ozugbo ị dar nebuvo isiokwu n’uche, chọpụta ihe ọmụmụ ndị ọzọ na otu isiokwu ahụ dị ugbu a. Ar jūs turite nišą mkpuchi ahụ na-ekpuchi? Ọ na-abịa na vidio ma ọ bụ ihe mgbakwunye? Jiri nlezianya na-amụ ihe ọmụmụ ndị ọzọ n’ebe ahụ.
Ugbu a, gbalịa ịchọta oghere ndị ahụ. Ar tu esi isiokwu ndị na-akọwachaghị ma ọ bụ na-atụgharị? Ịgbakwunye vidiyo na-eme ka ọganihu dịkwuo elu? Kedu ihe ọzọ ị ga-enye?
Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọzọ ị ga-eme, gbalịzie iche ụzọ kacha mma ị ga-esi kwadebe akwụkwọ ahụ. Iji maa atụ, inwere ike ịkọ isiokwu a na ihe nkiri televishọn ma ọ bụ ihe nkiri a ma ama. Anyị emeela ebe ugboro ole na ole dịka isiokwu "Otu esi agba Blog’as „Otu n’ime ndị shark si Shark Tank“" jana "Aš galiu sužinoti apie „Vampyro dienoraščius“, kurie bus paskelbti „idejine nada“, „na-agụ akwụkwọ, na-akpakọrịta“".
Svetainė n’imechi isiokwu a n’ụzọ pụrụ iche, ịnwere ike inyere ụmụ akwụkwọ dar žinomas kaip ịghọta isiokwu ahụ nke ọma.
Agbanyeghị na ọ dị mkpa ịhọrọ isiokwu a ma ama, ahọpụtakwala ikuzi otu esi agbanwe taya ma ọ bụrụ na i chee na nke ahụ bụ ihe nzuzu onye ọ bụla nwere ike ịme, na ị gaghị agban. Gali būti, kad ikemara ọtụtụ ihe gbasara isiokwu ahụ, mana ọ bụrụ na inweghị mmụọ na ya ma na-akuziri ndị ọzọ banyere ya, mgbe ahụ ụzọ ahụ ga-ada.
Sattụtụla klas ebe we we re we we wa gwa onye prọfesọ achọghị n’ezie ịnọ ya? Ọ bụ na ọ bụghị ihe ọchị ọ bụ? Ugbu a, chee echiche banyere ndị nkuzi ị nwegoro mmasị ịkọrọ gị ihe ha maara. O yikarịrị ka ị nwetara ọtụtụ ihe na klas ndị ahụ.
Nr. 4: Aš niekada nebendravau
Ọ na-aga n’ekwughị na ị ga-eburu isiokwu nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị nwere mmasị ịmụtakwu ihe. Ọ bụrụ na ịhọrọ isiokwu nke pụrụ iche, ọ pụrụ ịbụ na ị ga-eme ka nhepụta gị dị ukwuu iji dọta ndị na-ege ntị. Ịịọọọụụweweịweịwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe.
N’aka nke ozo, oburu n’enye gi uzo esi meputa udiri ihe puru iche ma nwekwaa anya dika otu n’ime ha ma weputa udiri uzo ozo, igha n’enye gi otutu ndi n’adiri.
„Google“ raktinių žodžių nėra „SEORush“, bet ne daugiau kaip „Google“ raktinių žodžių..
„Nzọụkwụ # 2:„ Nweta “platforma
Enwere ọtụtụ nyiwe dị iche iche ịwere ike ike iji. We we ike ọ ọ ọ ọ ye ye we we we ọ ọ ọ ị U U U U U U U U U U U U U U U U U U ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ịwan Ị Ọmụmaatụ, „Forbes“ akivaizdūs, naky nkụzi nke Udemy na-eme ihe doka $ 7,000 kwa otu, mana njikwa dị elu. Na, o jau nebegaminsite 60 USD, jei ne, o ne, mkpụrụ isii.
"N’ikpeazụ, ndị na-agbaso nnukwu mgbasa ozi na mgbasa ozi ọha na lake nikere ike ịhazi ndị na-ege ntị ka ha zụta – dar ne visi ike mepịta ọnụ ọgụgụ isii kwa afọ site na ọmụmụ ihe," ka Dorie Clark dere, bụ onye dere "Ọzọ Isi Mee Mkpụrụ Akwụkwọ Ego."
Agbanyegh na agaghị ekwe omume ịkọpụta nhọrọ niile, aga m enyocha ụfọdụ ndị kachasị ewu ewu dị.
„Moodle“ yra „Open Source“, kur dar nėra nieko panašaus į „iji nye ọzụzụ n’ịntanetị“ svetainę. Ọ na-enye gị ohere ikwenye ụfọdụ ụmụ akwụkwọ, guzobe nchekwa nchekwa paswọọdụ, ma mepụta ọmụmụ, tinye vidiyo, ma nwee ebe mkparịta ụka n’otu ebe dị mma. N’ezie, ị ga-atụkwasị obi n’ụdị okporo ụzọ ị ga – ebupute saịtị gị iji chọta ụmụ akwụkwọ, mana ọ bụrụ na ịnwela ndepụta izizi Buru Ibu, nhọrọ a nwere ike ịbị.
Web b webrụ na ịchọrọ ịnye ihe ọmụmụ gị dị ka webinars nke ndị ọrụ nwere ike ibudata na achọ, WizIQ bụ nhọrọ dị oke mma. Nauji gbakwunye skaidrės, jūsų svetainė nėra aprašyta, ma gụnye ọdịyo na faịlụ vidio. „WizIQ“ na-enye n’ahịa n’Ịntanet nke dar nebuvo panaši į gėjų, dar žinomus kaip inweta ụmụ akwụkwọ svetainė na okporo ụzọ ha. Sužinok daugiau, „WizIQ“ taip pat žinomas kaip „Moodle“ „Blackboard Learn“.
N’ezie, rašyk, kas mums reikalinga, kad nch nkwa nchịkwa. Arefọdụ bụ n’efu, ụfọdụ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịchọghị ọgbaghara na ngwanrọ ngwanrọ, ị nwekwara ike ịnye ụzọ gị site na ndepụta nzipu ozi ebe ezigara onye ọrụ ahụ mmụta ọhụrụ kwa ụbọchị. Nhọrọ ọzọ bụ ụlọ ebe ochie na-akparịta ụka n ’onlinentanet ebe ị na-ezute ụmụ akwụkwọ n’ onlinentanetị n’ụbọchị na oge ma gosi klas gị. Studentų akwụkwọ na-ajụzi ajụjụ ọ bụla ha ka chọrọ.
Aš negaliu pasakyti, kas yra „na-ede akwuchekwọ“:
Ona na-aga ebe ahụ amaghị ihe ị maara. Ọ bụ onye mbido, yabụ bido na mbido.
Mee ka onye gụọ ọrụ gị iji nyere gị dar žinomas kaip ịchọta ụdị isi ma dozie ha.
Hụ otu òtù beta ilele ụzọ gị ma mee ka ị mara ma ọ bụrụ na ị nwere oghere nke ozi dị mkpa ka ejupụta.
Ide akwụkwọ ahụ, na ikekwe idekọ ya, bụ otu n’ime oge kacha eri oge ịre usoro ịntanetị. Chetakwa, na ị na -emepta ihe ị ga-erere karịa mgbe ọzọ. Yabụ, ka ị na-etinye nnukwu mbọ ugbu a, ị ga-enweta uru na yge oge dị anya.
„Nzọụkwụ # 4:„ Dezie maka Ịkwụsị “
Gụchaa usoro ahụ dum ma ọ bụ nwee usoro ịgụ ihe gụọ ya. Nke ga – enyere gị dar žinomas kaip okwu ọ bụla na okwu ahụ ma jide okwu ọ bụla dị egwu ma ọ bụ mbibi dị iche iche.
Ọbụna ma ọ bụrụ na nyocha gị na-ekwu n’ụzọ ziri ezi, ọ dị mkpa iji mezue nzọụkwụ a. Omume gwe nwere ike ịgụ na ụzọ nke na – eme ka o siere nwa akwụkwọ ahụ ike ịghọta ihe na – eme.
Ugbu a, ọ bụge ịtinye na mgbakwunye. Cheta na ichoro ka uzo gi ghara idi ire. Ọ bụrụ n’ịhọrọ isiokwu ndị mmadụ nwere mmasị ịmatakwu banyere, mgbe ahụ enwere ike ịwwelarị nkuzi ndị ọzọ gbasara isiokwu gị. Kedu ihe ga – eme ka nke gị pụọ iche? Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji debanye aha gị maka ndị ọzọ?
Aš negaliu žinoti, kas tau yra
Kpachara mama mgbe ị na-ejikọ ebe ọzọ na ụzọ gị. Neišmesk ka onye ọrụ ahụ malite ịgụ ebe nrụọrụ weebụ ọzọ wee ghara ịlaghachi na nke gị. Họrọ oke nhọrọ ma kesaa naanị ihe na-eme ka okwu gị sikwuo ike. Ọ ide ụ ụ ụ ụ he we we we we we ide ide ide ide ide ide m m m m ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ị ị ị ị ị ị ị.
Na, o ne Wu ụzị kachasị mma onye ọ b kerela kere, ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-eme ya, ọ gaghị eme gị ezigbo uru. Zụ ahịa gị n’ịntanetị dị oke mkpa. A nwere ọtụtụ ụzọ isi ere ahịa gị n’ịntanetị.
Mepụta weebụsaịtị raara onwe ha nye ịkọwapụta ihe mmụta gị na-enye ụmụ akwụkwọ nwere ike iru.
Ziga edeme na nke gị dienoraštis nke metụtara usoro ọmụmụ gị, mana enyekwala ọdịnaya ahụ ka ọ pụọ.
Įdiegta mūsų mokykla „Courseindex.com“.
Iji maa atụ, galiu dar kartą pasakyti „akwụkwọ ọbịa na saịtị nke na-esoghị asọmpi nke gị mana nwee ndị na-ege ntị yiri nke a. Ebumnuche ọzọ bụ ịga nnọkọ Ebe we dar nebuvo ike ijikọ onye ị na-amụrụ ihe.
Nzụkw Na # 7: Na-akpakọrịta na Ụmụ akwụkwọ
Debe ndị na-emepụta ihe na ya ka oge nke nwa akwụkwọ na-edeba akwụkwọ ahụ, ọ na-enweta nkọwa banyere ya mgbe ọ malitere na otu esi enweta usoro ahụ.
Hazie ihe nchetara n’ụzọ ka nwa akwụkwọ ghara ịdọpụ uche ya ma virėja gụchaa akwụkwọ ahụ.
Ọ gwụla ma ịnwere ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ, nke a na-atụghị anya ịmalite, na-emetụ dar žinomas kaip na ọkwa nke onwe gm ma hụ na nwa akwụkwọ ahụ na-anụ ụtọ mmụta ahụ. O bu ezigbo echiche imetu isi gi dar žinomas kaip mgbe emechara i omumu, rue nkera ozo, na nagwucha akwukwo a juo maka nyocha.
Gbaa ụmụ akwụkwọ ume ka ha debanye aha ndepụta gị ka ịnwere ike nọrọ na ihu ọbụlagodi ha gụsịrị akwụkwọ ahụ. Nke nwekwara ike inye gị ohere maka ịre ahịa ahịa mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enye ọzụzụ na ịmalite azụmahịa ọhụrụ, ịnwere ike ịgbakwunye ọzụzụ onwe gịdị ka mgbakwunye. Anyị ga-ekwurịkwu gbasara ịgbakwunye ọrụ ndị ọzọ iji tinye ego gị n’okpuru.
Cheta na ị dị mma, ọkachamara na ịnweta iji me ka ụmụ akwụkwọ gị nwee mmetụta na-adịgide adịgide.
„Nz 8kwụ # 8: Achụta isiokwu ọhụrụ svetainė na Ajụjụ
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na usoro gị gbasara ụzọ e si agba ụlọ ma ụmụ akwụkwọ gị na-ajụ maka ụzọ kachasị mma isi kpoo ụlọ ahụ, wewere ike ikechọrị usoro nlekọta icore.
Mgbe ụfọdụ, ajụjụ ga – eduga gị n’ihe omimi nke ị ga – enwe ike èièèèèé èe èe è itin itin ọ ọ ọ uru o o ma ma ma ma ma ụ mụ akwụkwọ gị nke abụọ. Ma, ka oge na-aga, ajụjụ ga-eduga gị na mgbakwunye dị mkpirikpi maka usoro ihe ọmụmụ gị. Na, ndre ike ị na-echekwa ego na-abata na ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta.
„Nzọụkwụ“ # 9: „Ike nke Ụgwọ Nkwụsị“
O niekad, ne taip, kaip ne, banyere ego a ga-eji kpata ego tupu. Nke a bụge mgbe ị na-arụ ọrụ otu ugboro mana ị na-enweta ego ebighi ebi. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ide akwụkwọ, ị na-edebe ya ere, ị na-enweta ego dị nsọ n’akwụkwọ ahụ oge niile ị na-ere ya maka ọre.
Usoro mmụta n’ịntanetị dịtụ yiri. Ozugbo ịmechara usoro mmụta a, ọ ga-aga n’ihu iweta ego ka oge na-aga.
Buru n’uche na ego ugwo bu nke choro ka ị na-ere ahịa na ebe nrụọrụ weebụ gi. Ma ọ bụghị ya, ndị ahịa dar nebuvo ike ịchọta ihe siri ike ịchọta gị na ahịa gị ga-agafe oge.
Inweta ego ezumike dị mkpa maka azụmaahịa gị. Naujas ike ide akwụkwọ ọsọ ọsọ naanị, mana maka na ị ga – enweta ego ọbụlagodi mgbe ị gụchara ya, ị ga – eme ka ego gị dịkwuo elu site n’ide akwụkwọ nke abụọ ebe a na – enye ndọ nke mb, atọ, nke anọ na ndị ọzọ.
„Nzọụkwụ # 10:„ ọzọ ndị ọzọ iji chebaa usoro gị “
„Ll ga acho kwa ileba anya n’ụzọ ndi ozo na eweputa akwukwo. Ekwuruola m na ị dar nebuvo panašus ịnye mgbakwunye ma tụfuo ihe ọmụmụ. Inwe ike inye ọzụzụ ị na-aga otu. Nke ga-enye ụmụ akwụkwọ nkuzi nkeonwe iji nyere ha aka ịghọta otu echiche.
Dịka ọmụmaatụ, ana m enyefe akwụkwọ na nkuzi Bekee maka ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ ụlọ. Eniere m ihe ọmụmụ ma na ntanetị na mmadụ. Na mbụ, m na-akụzi ihe ọmụmụ, ma amalitere m ịnye ụfọdụ ọrụ ntinyekwu, dịka ịkụziri ndị mmadụ n’otu n’otu, enyemaka na edemede akwụkwọ na kọleji, na ịịụụziri ụ.
Chee echiche banyere otu we dar nebuvo ike isi tinye uru ndị ọzọ na ọmụmụ ihe gị. Nchịkọta bụ nhọrọ kachasị anya, mana chee echiche n’èzí igbe ma hụ ihe ọzọ ị ga – enweta.
Gee ntị n’ezie na mkpesa. Nie ike idozi nsogbu dị n’uzọ gị site n’idozi okwu ọ bụla ụmụ akwụkwọ welitere. Ikekwe ėmė žiūrėti, kaip mtụga stikị, ihe mmụta vidiyo anaghị ebu ngwa, ma ọ bụ akụkụ akụkụ ahụ na-agbagha. N’agbanyeghi nsogbu a, nzaghachi umu akwukwo gi nyere bara ezigbo uru.
Naujas okwu ahụ gbasara usoro ịntanetị agaghị adị mfe ma ọ bụ me ngwa ngwa. Bụ ezigbo echiche ịrịọ maka enyemaka. Okwu ọnụ bụ otu kachasị mma na ọnụ ala mgbasa ozi.
Iwulite ndi otu dar žinomas kaip ha ha nyere gi dar žinomas kaip ikwalite uzo gi. Na ne akwụkwọ maka n’efu ma ọ bụrụ na ha ga-ekwu ya.
Ahịa ndị nkụzi ndị ọzọ (ọ bụghị ndị na-asọmpi) ma kwuo okwu ha mgbe ha na-ekwu maka nke gị.
Jụọ ndị na-emetụta ndị na-elekọta mmadụ ma ọ bụrụ na ha ga-atụle ịnwale ụzọ gị ma tụọ aro ma ọ bụrụ na ọ masịrị ha (jide n’aka na gị na ha buru ụzọ nwee mmekọrịta).
„Ll gha eju gi anya na otutu mmadu g’enyere gi dar žinomas kaip inyere gi dar žinomas kaip juodas.
„Ideanhe in the intranet adighi nhịahụ, mana ide usoro ịntanetị na-emetụta ndị mmadụ bụ ihe ịma aka. Svetainė n’ileba anya n’ihe niile mejupụtara klaasị mara mma, ị ga- azụlite aha dị ka ezigbo onye nkuzi. Ọ bụghị naanị ụmụ akwụkwọ gị ga-ahụ gị n’anya, kama ha ga-agwa gị ndị ọzọ.
Ka ị na-etolitas aha gị, ị ga-erekwu ọtụtụ ọmụmụ, na -emepụta ego ezumike ahụ anyị kwuburu maka n’elu. Na akụkụ nke abụọ nke isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ndụmọdụ ụfọdụ sitere n’aka ndị ọzọ mepụtara usoro mmụta na-aga nke ọma. Ga-amụta ihe n’ihe ndị ha mejọrọ na ihe ha rụpụtara.
Laa azụ na 1996, amalitere m ịnye ọmụmụ i ederede n’ịntanetị site na ọnụ